खोप कार्ड हराउने समस्या, हराएमा के गर्ने ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperखोप कार्ड हराउने समस्या, हराएमा के गर्ने ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
खोप कार्ड हराउने समस्या, हराएमा के गर्ने ?
“खोप यति समयपछि लगाउने भन्ने वैज्ञानिक आधार हुन्छ र त्यसको अन्तर तोकिएको पनि हुन्छ। त्यसका साथै खोप नपाएकाले खोप नै नपाउने र केहीले बढी खोप लगाउने अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ ।”
त्यस्तो अवस्था आएमा खोप लगाउनेलाई पनि नकारात्मक असर पर्ने र नपाउनेमा सङ्क्रमण बढी हुने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।